Simon Raffeiner anotsanangura kuti nei Ubuntu Runhare isina kubudirira | Linux Vakapindwa muropa
Simon Raffeiner anotsanangura kuti nei Ubuntu Runhare isina kubudirira
Simon Raffeiner, anonyanyo kuzivikanwa se "sturmflut", aimbove mushandi muUbuntu Runhare chirongwa, chirongwa chakavimbisa zvakawanda, asi icho chakaparadzwa, pamwe neiyo Unity desktop. Maawa mashoma apfuura, Simon akatsanangura zvikonzero nei chirongwa ichi chakundikana.
Pakati pezvikonzero zvikuru zvataurwa, unogona kuwana chaive chirongwa chakange chisina kuvhurika zvakakwana kunharaunda, sezvazviri nema desktop anoshanda masystem. Zvakare, kukwikwidza kunotyisa neApple uye iOS hakuna kubatsira zvakanyanya kana.
Simon Raffeiner anotsanangura izvozvo Canonical haina kukwanisa kunongedza imwe niche yemusika uye kuti mafoni anga asina ruzivo rwakanaka rwevashandisi. Uye zvakare, Ubuntu Runhare yaingowanikwa mune mamwe ma terminals emhando dzakadai seMeizu neSpanish BQ. Aya magetari aive akaoma kuuya uye akapa zvinhu izvo zvaive zvisina hunyanzvi.
Chaizvoizvo iyo chete yakanaka chimiro cheUbuntu Runhare yaive kusangana, iyo yakavimbisa zvakawanda, ichigadzira Unity 8 desktop iyo yakashanda zvakafanana pane nhare sePc. Nekudaro, izvi, sekuziva kwedu, zvakashaya basa uye zvese nharembozha nedesktop zvakaiswa parutivi.
Simon zvekare anopomera Canonical yekusatengesa zvakanaka, sezvo mumusika uno, zvakakosha kuti uite mushandirapamwe wakanaka wekutengesa pane kupa hwakawanda hunyanzvi hunhu. Neichi chikonzero, ivo chete vadi venyika yeLinux ndivo vaiziva nezve kuvapo kweUbuntu Runhare uye vanhu vazhinji havana kutenga nekuti ivo vaisatombozviziva.
Simon aive mumwe wevarume vakakosha muchirongwa ichi, sezvo aibva 2013 kusvika 2016 achitarisira nzvimbo dzinoverengeka senge kugadzirwa kwemishumo yekukanganisa kana kugadzirwa kwema Tutorials. Neichi chikonzero, isu tinogona kupa kutendeseka kumashoko ake, ayo aakaburitsa pakutanga pano.
Nezve kusangana, kunyangwe Ubuntu yarega chirongwa ichi, kuchine vanhu vasingarase tariro. Kana iwe wakatenga iyo Ubuntu Runhare kana piritsi uye iwe usingazive zvekuita nazvo, unogona kushanyira iyo webhusaiti webhusaiti ubports, izvo zvinochengeta zviri zvipenyu kurota kwekuve ne100% yakashandurwa Ubuntu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Simon Raffeiner anotsanangura kuti nei Ubuntu Runhare isina kubudirira
Adrian Rodriguez akadaro
Ini ndanga ndakamirira ubuntu foni distro inogona kuiswa pane chero terminal ine android.
Pindura kuna Adrian Rodríguez
Isu zvakare Adrián. Ini pachangu ndaitarisira zvakawanda kubva kune ino inoshanda system, nekuti mumaonero angu, Android inoparadza zvachose zviwanikwa zvine simba izvo zviteshi zvazvino. Nekudaro, parizvino isu tinogona kungotarisira mamwe mabhupu neUbuntu Phones dzakaburitswa.
Ini ndinobvumirana nemaonero ako, parizvino Android ROM mapurojekiti sedzinza, Slim, Omni, Aokp, nezvimwe. Ivo vakamisa nzira yekumisikidza uye kupenya kweavo terminals e-android. Ini ndaive ndasara nechido chekutsvaga .zip neBuntu Runhare rwakatakurwa rwakagadzirira kuiswa.
Kunyangwe chokwadi chiripo ndechekuti chirongwa ichi hachina kusvika pachiteshi chakanaka, kunonoka kusingaperi, kushomeka kwemaitiro ehukama (rangarira kuti kubatana 8 uye mir vakashoropodzwa zvakanyanya nenharaunda), chinhambwe kubva kune canonical nekuvanzika kwayo, pakati pemamwe matambudziko anoratidza chinhu; Izvo zvakakonzera kuti nharaunda irambe zvishoma nezvishoma kufarira purojekiti kusvikira yangozofa.
Akatenda kuti Canonical yakakanganwa musimboti wakatemwa naEric Raymond mubhuku rake "The Cathedral and the Bazaar" uye kuti muchidimbu anoti mumunda webudiriro nekuparadzira "nharaunda ishamwari yako huru." Zvinonyadzisa uye tinotarisira kuti kambani iyi ichawana hutungamiri hwayo padhesiki uye inodzoka nemweya iwoyo wehunyanzvi uyo wakazviratidza muna 2004.
Pindura kuna gibaalav
Ini ndinotora uyu mukana uye ndinotumira mubvunzo kune avo imi vari kuda kugadzirisa mamo mobiles neubports ...
Ndakaedza kupinda munzira yekudzosa neyangu meizu mx4 (ine ubuntu, hongu). Asi ini ndakanga ndisingakwanise kana kupinda munzira yekudzosa!
Paunenge uchimanikidza makiyi evhorumu (kumusoro) uye kuvhura, iyo terminal inotaura kuti iri kupinda yekudzoreredza modhi, asi haina kuratidza menyu sarudzo, inongoratidza chete logo.
Pane chero munhu anoziva zvinogona kuitika kana maitiro ekudzoreredza sarudzo dzekudzosa? Pasina kupora… Ini handichakwanise kugadzirisa… uye zvakatoipisisa, ini handizokwanise kushandura OS zvachose xD
Izvo hazvina kushanda, nekuti… Ndiani anoda foni yausingakwanise kuisa Wathsapp pairi?
Mumwe munhu anogamuchira kuti kushandiswa kwechishandiso senge inomiririra kukanganiswa kwehunhu hwako uye anonzwisisa inotevera fomula
Kana shamwari dzako dzisingakwanise kunzwisisa misimboti nei usingashandise zvikumbiro zvepamutemo nekuda kwemutemo wavo wega, ivo havazove shamwari dzakadai :)
Kubva pakuona kwangu zvakatadza nekuda kwechimwe chinhu chiri nyore kwazvo. Akanga asina WhatsApp. Payakabuda ndipo pandakataurirwa nemunhu wese. Ini zviri pachena ndinosarudza kushandisa Teregiramu, asi ruzhinji runoshandisa chirongwa ichi. Ini ndaive padhuze nekuitenga, uye ndinofungidzira vanhu vazhinji vakafunga zvakafanana neni. Pasina mubvunzo kutaura, pakanga pasina GPS yakanaka
Ichokwadi ndechekuti ini ndakamirira kwenguva yakareba vhezheni yeiyo htc imwe m7, ivo vaive nousimbe kuchinjira kumatunhu akasiyana, vaifanira kunge vakabatana necyanogen kana lienage kana chero yevagadziri vechikwata chevaroma, sezvingave zvikwata yeanenge amateur Android adepts, anokwanisa kuchinjanisa rom ne nougat (semuenzaniso) kune chero chishandiso kunze uko nepo cononical ichingozviitira matatu mamodheru, ichisiya gaka rakakura muvashandisi isu tingadai takariisa munharembozha dzedu, pa chikamu changu kwaingova kuregeredza kunotyisa….
IO Inopindirana inochengetedza kodzero kune HITMAN uye inozvimiririra
Gnome Tweak Chishandiso inowedzera iyo Global Menyu kuGnome